Abemi base-Bhritane nabaseMelika baxelele ukuba baphephe ihotele i-Kabul
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba eziQhekezayo zaseAfghanistan » Abemi base-Bhritane nabaseMelika baxelele ukuba baphephe ihotele i-Kabul
Iindaba eziQhekezayo zaseAfghanistan • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • ulwaphulo-mthetho • Iindaba zikaRhulumente • Iihotele kunye neeholide • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba eziHlumayo zase-UK • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Oko kwathathwa iTaliban, uninzi lwabantu bamanye amazwe bayishiyile iAfghanistan, kodwa ezinye iintatheli kunye nabasebenzi abancedisayo bahlala kwikomkhulu.
I-Taliban ifuna ukwamkelwa kwilizwe kunye noncedo ukunqanda intlekele yoluntu.
I-Taliban izabalazela ukubamba isoyikiso kwisahluko se-ISIL sase-Afghanistan.
Abantu abaninzi babulawa kwi-mosque kuhlaselo olwenziwe liLizwe lamaSilamsi kwiPhondo laseKhorasan, ISKP (ISIS-K).
Isebe likaRhulumente wase-United States lixwayise bonke abemi base-US e-Afghanistan ukuba bahlale kude neehotele kwisixeko-dolophu saseKabul. I-Bhritane yaNgaphandle, i-Commonwealth kunye neOfisi yoPhuhliso ikhuphe isilumkiso esifanayo kubo bonke abemi base-UK okwangoku kweli lizwe.
Ihotele yaseKabul Serena
“Abemi base-US abakufuphi okanye kufutshane ne Ihotele yaseSerena kufuneka ihambe kwangoko, utshilo iSebe laseMelika laseMelika, ecaphula "izoyikiso zokhuselo" kule ndawo.
"Ngenxa yemingcipheko eyandileyo uyacetyiswa ukuba ungahlali kwiihotele, ngakumbi eKabul," utshilo uOfisi Wezangaphandle, we-Commonwealth kunye neOfisi yaseBritane.
Isilumkiso sifike kwiintsuku nje ezimbalwa emva kokuba abantu abaninzi bebulewe kwimosque kuhlaselo olwenziwe liLizwe lamaSilamsi kwiPhondo laseKhorasan, ISKP (ISIS-K).
ukusukela Taliban ukuthatha, uninzi lwangaphandle lushiye iAfghanistan, kodwa ezinye iintatheli kunye nabasebenzi abancedisayo bahlala kwikomkhulu.
Eyaziwayo Ihotele yaseSerena, ihotele yodidi ethandwayo ngabahambi beshishini kunye neendwendwe zangaphandle, iphindwe kabini yaba lixhoba lokuhlaselwa ngabanqolobi.
I-Taliban, eyabamba amandla e-Afghanistan ngo-Agasti, ifuna ukwamkelwa kwilizwe lonke kunye noncedo ukunqanda intlekele yoluntu kunye nokunciphisa imeko yezoqoqosho yelizwe.
Kodwa, njengokuba iqela labanqolobi litshintsha lisuka kwiqela elixhobileyo laya kumandla olawulo, kunzima ukuba nesoyikiso esivela kwisahluko se-ISIL saseAfghanistan.
Ngempelaveki, abadala Taliban kunye nabathunywa baseMelika babambe intetho yabo yobuso bokuqala kwikomkhulu laseQatar iDoha okoko kwarhoxa iMelika.
Ezi ntetho “zijolise kukhuseleko kunye nobunqolobi kunye nokuhamba ngokukhuselekileyo kubemi base-US, abanye abantu bamanye amazwe kunye namaqabane ethu e-Afghanistan,” ngokutsho kwesithethi seSebe likaRhulumente uNed Price.
NgokweSebe likaRhulumente, ezi ngxoxo "zazingacacanga kwaye zinobungcali" kwaye amagosa aseMelika aphinda athi "iTaliban iya kugwetywa ngezenzo zayo, hayi ngamazwi ayo kuphela".
I-Taliban ithe i-US ivumile ukuthumela uncedo e-Afghanistan, nangona i-US ithe lo mbandela uxoxwe kuphela, kwaye nokuba naluphi na uncedo luya kubantu base-Afghan hayi kurhulumente we-Taliban.